Shiinaha warshad MEDALS Wacyigelin | Kingtai
Iyada oo ay jiraan Dhacdooyin badan oo wacyi gelin ah iyo baahida loo qabo Abaalmarinta la xiriirta lacag ururiyayaasha oo lala xiriiriyo mowduucyadan badan, waxaan soo bandhignay khadad koobab ribbono ah iyo billado. Kuwani waxaa loo isticmaali karaa mid ka mid ah xirmooyinkayada caalamiga ah waxaanan shakhsiyaadka u iibineynaa si shaqsi ah. Waxaan sidoo kale bixinnaa xirmooyinkayada kaqeybqaadashada ee loogu talagalay qaababka koobabka midabka cusub.
Wax kastoo sababa ama jirro dhacdadaadu u noqon karto, tixgeli abaalmarintayada wacyigelinta iyo billadaha. Billad-sharafeedyadan loo yaqaan 'ribbon-themed' ayaa u weyn wacyigelinta kansarka ama ka warqabka cudurrada kale ama sababaha. Abaalmarinta wacyigelinta kansarka ee khaaska ah waxaa lagu daabici karaa midabyo badan oo tilmaamaya midabka xargaha ee kugu habboon iyo sababta. Ku fiican jinsiyadaha iyo dhacdooyinka kale ee isboortiga, ku habeyso billadahaaga wacyigelinta qoraalkaaga shakhsi ahaaneed. Nala soo hadal haddii midabadaadu aan lagu cayimin xulasho ahaan waanan ka dhigi doonaa mid shaqeynaya. Dhagsii bilada tartanka wacyi galinta ee hoose si aad u aragto qiimo dhimis.
Abaalmarinta Abaal-marinta Ribbon ee loo yaqaan 'Schoppy's Awareness Ribbon Awards' waxay kuusoo bandhigaysaa xargaha xulashada midabadaada. Miisaannada Wacyigelinta ayaa inta badan lala xiriiriyaa kor u qaadista wacyiga sababo kala duwan. Abaalmarinadani waa kuwo aad u wanaagsan oo loogu mahadcelinayo deeq-bixiye ama qorsheeye hay'addaada samafalka ah ama la siinayo kuwa ku guuleysta dhacdada.
Hore: Billadaha Guusha
Xiga: BADBAASADDA CAGTA